युवकको हत्या आशंकामा दुई जना पक्राउ- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
युवकको हत्या आशंकामा दुई जना पक्राउ
जेष्ठ १२, २०७९ केदार शिवाकोटी
दोलखा — दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–३ का एक युवकको हत्याको आशंकामा प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबार बिहान २४ वर्षीय यानबहादुर बस्नेतको शव घर नजिकैको जंगलमा शंकास्पद रुपमा रुखमा झुडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । उनको हत्याको आशंकामा दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्त शुसिल केसीले बताए ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाहरुको परिचय खुलाएको छैन । प्रहरीले हत्या वा आत्महत्या पोष्टमार्टम रिपोर्टपछि मात्रै भन्ने सकिने जनाएको छ । स्थानीयले भने बस्नेतको हत्या गरेर रुखमा झुण्डाएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार साँझबाट सम्पर्कविहीन बनेका बस्नेत बुधबार रुखमा झुडिएको अवस्थामा फेला परेका परेका थिए । सम्फर्कविहीन बनेका उनको खाजी गर्ने क्रममा स्थानीयले झ्याकुको सर्सेपु विद्यालयको नजिकै काफलको रुखमा झण्डिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो । उनी मानेडाँडा माध्यमिक विद्यालयमा लेखापालका रुपमा कार्यरत थिए ।
यसैबीच बुधबार साँझ तामाकोशी गाउँपालिका–१ गोपीखोलामा एक जना पुरुषको शव फेला परेको छ । उक्त शवको पहिचान खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १२:२९
प्रधानमन्त्रीको वडामा चाहिँ केही पनि जाने भएन, त्यहाँ कांग्रेसले जितेन : ओली
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका क्रममा पैसाको प्रलोभन दिइएको बताएका छन् । उनले मतदातालाई धाक र धम्की दिइएको पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राख्दै ओलीले कांग्रेसले नजितेको ठाउँमा बजेट नजाने भनेर कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणाले दिएको अभिव्यक्ति तर्फ इंगित गरेका हुन् ।
'प्रधानमन्त्री देउवाको वडामा केही पनि नजाने हो ? 'भनेर पनि ओलीले देउवालाई प्रश्न गरेका थिए । 'रुखमा भोट नहाल्नेलाई पैसा पठाइँदैन भनियो । संयोगकै कुरा हो, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज जाने भएछ । कुन पालिकामा कांग्रेसले जितेको छ त्यहाँ जाने होला । अमरगढी जितेको छ कि छैन ? अमरगढी कांग्रेसले जितेको भए त ठीकै छ नत्र कुन कुनामा लगेर राख्नुपर्ने हो मेडिकल कलेज,' उनले भने, 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आफ्नै वडामा चाहिँ केही पनि जाने भएन, किनभनेर त्यहाँ रुखले केही पनि जितेन कि क्या हो । लोकतन्त्रको हरिबिजोग अरु के हुन्छ ।'
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुराको गन्यापधुराको वडा नम्बर १ मा कांग्रेस हारेको थियो । गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा कांग्रेस उम्मेदवार चन्द्रबहादुर देउवालाई १ सय २९ मतले पराजित गर्दै प्रधानमन्त्रीको वडामा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर बीपी कांग्रेसको चुनाव चिह्न करुवाबाट चुनाव लडेका नरेश भण्डारी निर्वाचित भए । भण्डारीले ६ सय ७३ मत ल्याए भने पराजित कांग्रेसका देउवाले ५ सय ४४ मत पाएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १२:००